घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, १८ असार
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच कुरा मिलेपछि नेकपारूपी २ वर्षे यात्रा गरेका यी २ ‘महत्त्वाकाङ्क्षी र जब्बर’ नेता उस्तै परे यतिबेला हात हालाहालको अवस्थामा छन् ।
जारी स्थायी कमिटी बैठक सुरु नहुँदै बैठकमा आफूमाथि प्रहार हुने ठानेका ओलीले सत्ताको किलो, हल्लाउन ‘आफ्नै नेताले भारतको साथ लिएको’ अभिव्यक्तिको घुयेँत्रो फ्याँके ।
ओलीको घुयेँत्रो ठीक ठाउँमै परेको छ । प्रचण्डले भारतले होइन, आफूले ओलीलाई हटाउन खोजेको बताइदिए । त्यसैले ७ बुँदाको एजेण्डा बोकेर बसेको नेकपा बैठक ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउनेमै केन्द्रित छ, आजसम्म ।
एकतापछिको अधिकांश समय तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग जुधेरै बिताएका ओलीलाई यसबीचमा सत्ता मनपरी ढंगले चलाएको, पार्टीमा मनपरी गरेको अभियोग छ ।
एकतापछि प्रचण्डसँग करिव २२ पटक मतभेद झेलेपछिको स्थायी कमिटीमा निर्णायकझैँ लाग्ने वाक् युद्धमा छन् नेकपाका अध्यक्षद्वय ।
यस अभियानमा प्रचण्डलाई तत्कालीन एमालेका नेताहरू नेपाल र खनालसहितका नेताको (बलियो ?) साथ छ । माधव नेपालले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को एजेण्डाबाट प्रचण्ड, नेपाल र खनाल ओलीका दुवै पद खाली गराउने अभियानसम्म पुगेका छन् ।
हिजो बेलुकी र आज बिहान भएका गुटगत भेलापछि थप अविश्वासमा परिणत भएको नेकपाभित्रको विवाद फेरि २ दिनलाई टरेको छ ।
आज दोस्रो पटक बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संसद अधिवेशन सकिएपछि कुनै अध्यादेश नआउने प्रतिबद्धता र आश्वासन पाएपछि आपसी छलफल गरेर पुनः बैठक बस्ने शर्तमा बैठक स्थगित भएको छ ।
नेकपा नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार ओली अहिलेसम्म दुवै पद छाड्न तयार छैनन् । प्रचण्ड र नेपाल ओलीलाई सके दुवै, नसके एउटा पदबाट हटाउने अभियानमा छन् ।
तर, राजनीतिमा जब्बर ओलीले सहमतिका लागि भनिएको यी २ दिनमा प्रचण्डसँग साँठगाँठ गर्ने ओली निकट नेताहरू बताउँछन् ।
चौतर्फी दबाबमा परेका ओलीले यी २ दिनमा प्रचण्डसँगको आलोपालोको पुरानो सहमति ब्युँताएर माधव नेपाललाई ‘हेरेको हे¥यै’ पार्ने रणनीति तय गर्ने उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ ।
ओली निकट एक नेताका अनुसार दबाब महसुस गरेका ओलीले प्रचण्ड-नेपाल गुट फुटाउन पुरानो सहमति ब्युँताएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गर्नेछन् ।
ती नेताका अनुसार यस योजनामा ओली सफल भए भने पनि ओलीले एक पद भने गुमाउनुपर्नेछ । तर, माधव नेपालसँग गठजोडमा रहेका प्रचण्डलाई मनाउन ओलीलाई त्यति सहज भने छैन ।
पद गुमेको अवस्थामा उनले माधव नेपालको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को एजेण्डामा सहमति भएको सन्देश दिनेछन् भने नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि टर्नेे अवस्था आउनेछ ।
नेकपा स्थायी कमिटीका आमन्त्रित सदस्य केशव बडालका अनुसार नेकपाभित्रको वर्तमान झगडा शीर्ष नेताको ‘इगो’ मात्र हो ।
उनलाई पत्याउने हो भने ओलीलाई २ पदमा देख्न नचाहने नेपाल र आलोपालोबाट पछि हटेर गल्ती गरेको निष्कर्षमा रहेका प्रचण्ड दुवैका लागि आलोपालो सहमति ब्युँताउनु नै ‘इगो’ व्यवस्थापनको कडी हो ।
विश्लेषकहरू नेकपालाई भुट्न ठिक्क परेको हाँडीको मकै मान्छन्, जुन स्थायी कमिटीसम्म आइपुग्दा तातेर पड्किएको छ ।
अब सहमतिका लागि छुट्याइएको बाँकी २ दिनमा हाँडीका सवै मकै पड्किसक्नेछन् । त्यसबेला नेकपाभित्रको विवाद कम्तीमा ६ महिनाका लागि व्यवस्थापन हुने नेताहरू बताउँछन् ।
जनमत, जनअपेक्षा र गैरजिम्मेवारी
नेकपा बन्नुअघि नै नेपाली जनताले आमनिर्वाचनमार्फत् तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भारी मत दिएर दिगो सरकार सञ्चालनका लागि पठाएका हुन् । उक्त तथ्यबारे वर्तमानका नेकपा नेता अन्जान अवश्य छैनन् ।
लामो समयको हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता खेपेका जनताले अब स्थिरता, शान्ति र विकासको सपना देखेका हुन् । अझ डेढ वर्षअघि २ ठूला कम्युनिस्ट घटकबीचको एकता घोषणापछि त नेपाली जनताले साँच्चै सुन्दर सपना देखेका हुन् ।
जनताको त्यो सुन्दर नेपालको, सुखी र समृद्ध नेपालीको सपना वर्तमान सरकारले नाराकै रूपमा अघि सारेपछि जनता खुसी नहुने कुरै भएन ।
तर, राजनीतिको बाटो बाङ्गियो बीचमै । सत्ताधारी दलबीच नै शक्ति र सत्ताको अथवा कुर्सीको खिचातानीको पुरानै रोग बल्झियो । उक्त रोग यसरी फैलिँदै गयो कि आजसम्म आउँदा क्यान्सरको रोगी जस्तो कहिले पूरै ठीक भएजस्तो, कहिले शिथिल भएर परमधाम गइहाल्ला जस्तो अवस्थामा छ नेकपा ।
माथि भनिएझैँ नेकपाका शीर्ष नेताबीच नै बेमेल र अन्तद्र्वन्द्वले सरकार सञ्चालन गरिरहेको महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार दल आपसी वा आन्तरिक लडाइँमै फसिसकेको छ । यसको दुष्परिणाम देखिन थालिसकेको अवस्था छ ।
यहीबीच विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको बढ्दो संक्रमण, कोरोना कहरकै बीचका अनेकौँ अनियमिततामा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू र सरकारका आसपासका विश्वासपात्रहरूको संलग्नता, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका कारण सामान्य संक्रमितको फटाफट मृत्यु, गरिबी, अभाव र जीविकाका अन्य उपायको अभावमा आत्महत्याको बढ्दो अवस्था आदि कुराहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेकै छन् ।
यससँगै पछिल्लो समय बढिरहेको नेकपाभित्रको विवाद वा शक्ति सङ्घर्षले निकै ठूलो नोक्सानी गरिरहेको निष्कर्षमा धेरै विश्लेषक पुगिसकेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘जनताको विश्वासलाई बुझ्न सकेन नेकपाले । जनताका आकाङ्क्षा र आवश्यकताको पहिचान गर्न सकेन नेकपाले । जनउत्तरदायित्वबोध गर्न सकेन नेकपाले ।’
नेकपा अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा समान्य दल होइन भने यसका नेतृत्व प्रतिपक्ष होइनन् । सत्तारुढ हुनुको मर्म, मान्यता, अर्थ, जिम्मेवारी केही पनि महसुस गर्न सकेको देखिँदैन आज नेकपाले ।
यसका केही कारण छन् । जस्तो कि विगतमा २ धार (बाटो)बाट नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका र हुँदै गरेका २ राजनीतिक दलहरूबीचको राजनीतिक मार्गको स्पष्टताको अभाव एउटा कारण हो भने व्यावहारिक रूपमै लामो खुला राजनीतिक अभ्यासमा अभ्यस्त विगतको एमाले र भर्खरै संसदीय अभ्यासमा आएको विगतको माओवादीबीचको कार्य गराइ र अभ्यासमा हुने भिन्नता अर्को कारण हो ।
उसो त डेढ दशकको संसदीय खुला राजनीतिबाट माओवादी पक्षले धेरै कुरा सिकी सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
अर्को कारण, जुन अत्यन्त खास कारण हो नेकपाभित्रको द्वन्द्वको, त्यो भनेको चाहिँ धेरै नेता हुनु र सबैले सक्रिय राजनीतिमा रहिरहनु हो । विगतमा पार्टी नेतृत्व गरेका, विशेषगरी विगतको एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अझै सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरूलाई सरकारमा पनि र पार्टीमा पनि केपी शर्मा ओली हावी भइरहेको पटक्कै मनपरेको छैन ।
एउटै व्यक्तिले दुवै हातमा लड्डु लिएर बसेको तर आफू भने भोकै बस्नुपरेको दुःख कति होला यिनलाई ? यो सामान्य मानिसले पनि आँकलन गर्न सक्छ ।
उता, लामो समय तत्कालीन माओवादीमा पदमा एकाधिकार जमाएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई ‘म त नेपालको इतिहासको खतरनाक पात्र पो हुँ त ! त्यत्रो सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर आएको पात्र पो हुँ त ! मेरो राजनीतिक अस्तित्व त जसरी पनि जोगिनुपर्छ/जोगाइदिनुपर्छ’ भन्ने कुण्ठा अत्यन्त धेरै छ ।
यसरी कम्तीमा ३ पक्षमा बाँडिएको वर्तमानको नेकपालाई साँच्चै एक बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने अन्य तल्लो तहका नेताहरू पनि आफैँमा विभाजित छन् । वामदेव नामका गोटीलाई कहिले प्रचण्ड-नेपालले त कहिले ओलीले चलाइरहेका हुन्छन् भने भीम रावलको आफ्नै कुण्ठा छताछुल्ल छ । अन्य ‘वैचारिक’ र ‘मध्यमार्गी’ भनिने नेताहरू पनि सूक्ष्म रूपले कुनै न कुनै गुटका चेपमा परेकै छन् । उनीहरू अभरका बेला ‘तैँ चुप, मैँ चुप’को अवस्थामा छन् ।
यस्तो बेलामा नेकपा (एमाले-माओवादी केन्द्र)का केही नेता, कार्यकर्ताहरू पार्टी एकता गर्नुभन्दा विगतकै अवस्थामा फर्किनु उपयुक्त हुने कुरा गर्न थालेका छन् । अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादीकै अस्तित्वमा पुग्दा हुने बताइरहेका छन् ।
आमकार्यकर्ता र नेतामा यस्तो धारणा बनेमा वा ‘फ्रस्टेसन’ यही रूपमा बढेमा नेकपाको अवस्था के होला ? यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
र, नेकपा अहिलेको अवस्थामा कमजोर भयो वा पुनः फुट्यो भने नेपाल र नेपालीको भविष्य के होला ? भन्ने चिन्ता अब बढेको छ । यस्तो दुखद् अवस्था नआओस् भन्ने सबैको कामना छ । ५ वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गरेर देश र जनताको सुखी र समृद्धिको सपना, अपेक्षा पूरा गर्ने प्रमुख दायित्व वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको काँधमा छ ।
अहिले भिडिरहेका वा सत्ता र शक्तिका लागि जुधिरहेका नेकपाका शीर्ष नेताहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने, जनताले विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर पठाउँदा पनि केही नाप्न सकेनौ र आन्तरिक लडाइँमै समय, श्रम र ऊर्जा सक्यौ भने भोलिका दिनमा तिमीहरूलाई जनताले पुनः ‘प्रजा परिषद्’ बनाइदिनेछन् । अनि तिम्रो दम्भ र घमण्ड सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, १८ असार २०७७, १२:३३:००